Myanmar Celebrity နေ့စဉ်သတင်း၊ စက်တင်ဘာ (၁၀) ရက် – Monkey Viral
Myanmar Celebrity နေ့စဉ်သတင်း၊ စက်တင်ဘာ (၁၀) ရက်
စက်တင်ဘာလ (၁၀) ရက်နေ့ အတွက် Myanmar Celebrity အနုပညာ နေ့စဉ်သတင်း။
1. (၁၁) ကြိမ်မြောက် သက်ကြီးလူရွှင်တော် ပူဇော်ပွဲကျင်းပ
2. အလိုတော်ပြည့်ကျောင်းတိုက်မှာ ဆွမ်းကပ်ခဲ့တဲ့ နေတိုး မွေးနေ့အလှူ
3. ခက်ခဲပြည်သူများ အတွက် ထောက်ပံ့ လှူဒါန်းခဲ့တဲ့ ရေဗက္ကာဝင်း
4. မုန့်ဟင်းခါး ပြန်လည်ရောင်းချတော့မယ် ဆိုတဲ့ ရဲလေးမ
5. တန်ဖိုးထားတဲ့ ဆိုင်းဝိုင်းကို ရောင်းရတော့မယ့် ရွာစား ထက်အာကာ
@Myanmar Celebrity Update: Daily Update News of Myanmar Celebrities, September 10, 2021. #MyanmarCelebrityNews #MyanmarComedian #NayToe #RebeccaWin #YeLayMa #KKayMoe #KayKayMoe #HeinMinThu #HtetArkar #MyanmarThabinArtist #နေတိုး #ရဲလေးမ #ရေဗက္ကာဝင်း #ထက်အာကာ #လူရွှင်တော်သက်ကြီး
Categorized as Lifestyle Tagged CELEBRITY